Umzimveliso mveliso, abaxhasi - China Umxube wabenzi
I-VSSJA-2 (B2F) Uhlobo oluDibeneyo lweFlange esisiGxina
Iimpawu zoyilo lweMveliso Eyona nto iphambili kwimveliso yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ubunzima obukhulu, kulula ukuyisebenzisa, kwaye iyakhawuleza ukuyifaka. Ngaba nokumelana elungileyo, ukumelana oyile, acid kunye nokumelana kwealkali. Uyilo lobume bemveliso lusengqiqweni. Ukusebenza kokutywina kuthembekile. Akukho nto iwelding efunekayo. Umgaqo-siseko osebenzayo emva koba ...
Flexible ngerabha Joint
Iimpawu zomsebenzi ngokudibeneyo irabha edibeneyo, ekwabizwa ngokuba yi-vibber absorber, umbhobho wokungcangcazela umbhobho, ukudibanisa okuguqukayo kunye nokudibana kwethumbu njalo njalo, kukudityaniswa kombhobho kunye nokuguquguquka okuphezulu, ukuqina komoya ophezulu kunye nokumelana okuphakathi kunye nokumelana nemozulu. Iimpawu zayo zomsebenzi zezi: 1. Incinci ngobukhulu, ukukhanya ngobunzima, ukulungeleka okuhle, ukulungele ukufakwa kunye nokugcinwa. 2. Ngexesha lofakelo, ukunqamleza, ukuhamba kwe-axial kunye ne-angular ...